SALAADIINTA BEESHA ARAB OO KA HADLAY DHACDADII KA DHACDAY HARGEYSA | WWW.SOMALILAND.NO
SALAADIINTA BEESHA ARAB OO KA HADLAY DHACDADII KA DHACDAY HARGEYSA
Hargeysa(sl.no) 28 Apr.2008 – Suldaanka Guud ee Beesha Arab Suldaan Cumar Suldaan Maxamed Suldaan Faarax, oo ay weheliyaan Suldaan Barre Xaaji Xuseen iyo Suldaan Xuseen Xaaji Cabdi, ayaa caawa shir Jaraa’id oo ay si wada-jir ah ugu qabteen Huteel Hadhwanaag ee Magaaladda Hargeysa, waxa ay kaga hadleen Mudaharaadkii rabshadaha watay ee maanta ka dhacay qayb ka mid ah Hargeysa, iyaga oo dhacdaas ku eedeeyay dawlada Hoose ee Hargeysa iyo cid kale oo dano gaar ah leh.
Salaadiintani waxa ay ku doodeen in arrintan ay abaabushay cid damac siyaasadeed wadata mucaarid iyo muxaafid miday doontaba ha ahaatee, waxaanay soo jeediyeen in cidii falkaa ka dambaysay sharciga la horkeeno.
Ugu horeyn Suldaan Cumar Suldaan Maxamed Suldaan Faarax, oo shirkaa Jaraa’id ka hadlay ayaa yidhi, “Dhibaatadii saaka dhacday aad ayaanu uga xunahay, wanaan ka tacsiyadaynaynaa bulshada reer Somaliland. Arrintana waxaad mooda iyada oo wejiyo badan la isticmaalayo, qaab wanaagsana looma isticmaalin cid gaara oo lagu eedeynayo oo la leeyahay cidaa ayaa falkaa geysatay, laakin dhinacyada dawlada ha noqoto ma mucaaridka ha noqotee way ka qeyb-qaadanayeen.”
Isaga oo hadalkiisa sii watana waxa uu intaa sii raaciyay Suldaanka guud oo uu yidhi, “Cida barnaamujkan soo dhigtay waa dawlada hoose, oo xubnita hogaaminaysay shirkii ay go’aankan ku gaadheen waxa uu ka soo jeeda Xisbiyada Mucaaridka ah ee UCID, qoladana Kubadii ninkaasi soo dhigay ayuun bay si fiican u laadeen. Dabadeedna barnaamijkaasi qaabkii aynu maanta arkaynay ee foosha xumaa, ee aan hagaagsanayn ayuu u dhacay, waxaanad moodaa Somaliland in waxyaabo farabadan lagu marin habaabinayo oo arrinkeeda lagu war-wareejinayo.”
Suldaan Cumar, waxa uu ku dooday in beelaha Hargeysa ee ay ka tirsan yihiin ugu nabad jecelyihiin, “Beel ahaan marka anagu aanu ka tirsanahay beelahan Hargeysa arrinkayagu nabad ayuu ahaa, waxaanad moodaa, oo anaga ay nuugu muuqataa iintii duulimaad lagu yahay, siyaasiyiinta Somalilannd-na aanay kala jeclayn taas. Waxaan idiin sheegayaa inaanu anagu jecelahay in ay bulshada reer Somaliland nabad ku wada noolaato, qaabkay ugu wada noolaanaysaana waa kii ay hore ugu wada noolayd, oo laga daayo qod-qodka iyo waxyaabaha jawigooda bedalaya, dadka had iyo goor saxada siyaasada ku jiraana waa inaanay dhiiga dadka u isticmaalin fushiiga mabdi’gooda siyaasiga ah.” Sidaa ayuu yidhi, Suldaan Cumar Suldaan Maxamed.
Waxaanu sheegay in aanay beesha lafteedu ka madhnayn ka qayb-qaadashada falkan dhacay, isaga oo taa ka hadlayana waxa uu yidhi Suldaanku, “Kolay beesha laftigeedu qaladaadka kama madhna, oo xubno ka mid ah ayaa barnaamijyadan ka qayb-qaatay, intubana waxaad moodaa inay u adeegayaan sidii nabadani khal-khal u gali lahayd, aadna runtii waanu uga xunahay, bulshada reer Somaliland-na waanu ka raali galinaynaa. Arrintanina may ahay mid beesha oo kaliya ka soo fushay markaad eegto sidii saaka wax u dhacayeen, ee Hargeysa oo dhan ayaa meesha yaacaysay, ee dhagaxa tuurayay, dadkii dhibaatadu ka soo gaadhayna Hargeysa way u dhamayd, mana aha in beesha loo isticmaalo waji fool xun.”
Sidoo kale, Suldaan Cumar, waxa uu ku dooday in ay beel ahaan yihiin beesha nabadgaylada Somaliland dhidibada u taagtay, isaga oo taa ka hadlayana waxa uu yidhi,
“Beeshu waxay ahayd beeshii nabadgalyada Somaliland salka u dhigtay, ee Hubkii wareejisay, ee ilaa maantana ku taagan inay nabadii Somaliland ilaaliso. Marrkaa waxaanu jecelahay in qod-qodka laga daayo, waxaananu jecelahay in aan lagu ciyaarin noloshaa iyo dhismahaa aynu dhisanay ee aynu soo wadnay muddada dhawr iyo tobonka sannadood ah.”
Mar uu Suldaan Cumar ka hadlayay dad uu sheegay inay u adeegaan cid burinaysa nabadgaylyada Somaliland, “Horena waxaanu u sheegnay in loo adeegayo hadalkii uu yidhi Ninkii Qaramada-midoobay, welina lagama haddhin ee dad ayaa u adeegaya ama Xukuumadda ha noqoto ama mucaarika ha noqoto’e labaduba cagta ayay ku hayaan, waxaananu leenahay bulshada hadaan saani loogu adeegahaynin talo ayay bulshadu isugu noqon doontaa, mana aha beesha oo kaliya ee bulshada reer Somaliland oo dhan ayaa talo isugu noqon doonta.” Ayuu yidhi Suldaan Cumar.
Waxaanu Suldaanku tilmaamay in nabadgaylada Somaliland saran tahay Dooni, hadii cid gaari ay daloolisana ay la wada dagayso bulshooyinka Somaliland, “Hadii dadka siyaasad qaldan lagu isticmaalo oo la yidhaahdo, iyada oo beelo looga faa’iidaysanayo beeshan qas galiya si arrimaheeda nabadgalyo u baaba’aan iyana ay uga qaxdo meesha, lagaga qiximaayo, halkani waa Hargeysa in anaga nalooga qaxo mooyee anagu cid uga qixi mayno, ninawna taa haku talagalin, hadii nabada wax layeelana nin walba isaga ayay dhibaatadu taaban doontaa, oo Doonidaa nabada ayaynu saaranahay ee hadii la dalooliyo oo aad ka dayn waydaan mididaa aad kolba dhinac ka galinaysaa ogaada way inala wada dagaysaaye.” Sidaa ayuu yidhi Suldaanka guud ee beesha Arrab.
Waxaanu sheegay inaanay waqtigan ummadu u baahnayn in nabadooda wax la yeelo, iyadda oo ay saameeyeen dhibaatooyinka dhaqaale, abaareed iyo Sicir-bararka marba marka ka dambaysa kor ugu sii kacaya ummada aan daryeelka haysan ee Somaliland. Isaga oo taa ka hadlayana waxa uu yidhi,
“Ninkasta ama mucaarid ha ahaado ama dawlada ha ahaado’e hadaad daryeelka bulshadda ka horeysiin waydid aragtidaada siyaasadeed iyo rabitaankaaga Kursiga oo aad eegi waydo danta muwaadinka adiguna kuma noolaanaysid, nin halkan nolol wanaagsan ku qaadadnayaana ma jiro ee ha la ogaado.”
Sidoo kale, Suldaan Barre Xaaji Xasan, oo ka mid ahaa Salaadiinta shirka jaraa’id qabatay, ayaa isagu u duceeyay dadkii ku dhintay rabshaas iyo kuwii ku dhaawacmayba, waxaanu yidhi, “Dadkii dhintay Illaahay ha u naxariisto, inta dhaawaca ahna Ilaahay ha u tayasiiro.”
Suldaan Barre, waxa uu sheegay inay dhacdani ahayd mid aan la falinayn waqtigan aynu ku jiro, isla markaana waxa uu ku eedeeyay Golaha deegaanka Hargeysi inay arrintan iyagu ka dambeeyeen, masuulna ka yihiin dhibtii maanta dhacday,. “Dawlada Hoose ayaa waxan ka dambaysay, tii hore ee ka dhacday Dumbuluq dawlada hoose ayaa ka dambaysay, labadaa dhacdabana iyada ayaa ka dambaysay. Markaa dawlada hoose waxa loo igmaday inay dadka u adeegto ee looma samaysan inay dadka fidmo galiyaan, aad baananu uga xunahay waxa dhacay, anaga oo nabada jecel, oo nabadgalyada rukun u ah.” Sidaa ayuu ydihi Suldaan Barre Xaaji Xasan.
Isla marrkaana waxa uu soo jeediyay in sharciga la horkeeno cid kasta oo dhibkan dhacay ka dambaysa, oo aan lagaga hadhin, taasina tahay ta kaliya ee lagu kala badbaadayo. “Dhibta waxa wada ninmanka maalinba meel cusub iyo Degmooyinka magacaabaya, waana iyaga ragga Somaliland duminayaa, hadaan kuwaa laga qabana anagu masuul kama nihin waxa dhaca.” Sidaa ayuu yidhi Suldaanku.
Suldaan Xuseen Xaaji Cali, oo shirkaa jaraa’id ka hadlay ayaa sidoo kale Tacsi u diray dadkii rabshadahan dadkoodu ku geeryoodeen iyo guud ahaanba ummada Somaliland, isla markaana waxa uu sheegay in waxan dhacay ahaa wax la abaabulay oo cid darno gaar ah lihi ay wadato.
“Aad baanu uga xunahay dhibaatada ka dhacday Xaafadayada, dadku waa dad danyar ah, oo muceeshadi ku qaaliyowday, oo ay biyo la’aani hayso, oo abaari ku dhacday oo wax tar u baahan, ee maaha inta dadkaa loo dalbado Ciidamo boolis ah, oo nin ujeedo gaar ah lihi u adeegsado, aadna waanu uga xunahay, waxaananu leenahay dadkii waxaa sameeyay waa la garanayaaye sharciga ha la horkeeno, haddii la doonayo in wax la daweeyo, haddii la doonayo in lagu kala guurana dee cida gaarka ah ee ay wax kaga lumayaan ha la arko.” Sidaa ayuu yidhi Suldaan Xuseen.
Isaga oo hadalkiisa sii watana waxa uu intaa ku daray oo uu yidhi, “Waxaanu leenahay nabad ayaanu doonaynaa, waxaanu beeshayada faraynaa waxa maanta dhacacy inaanay halkaa dhaafin oo aanay wax dambe dhicin. Waxaanu faraynaa dadka ay gaarka ugu dhacday geeridu inay Maydkeeda aasato, waayo waxa dhacday inay beelo Somaliland ka mid ahi yidhaahdeen Maydka aasi mayno ee waanu haysanaynaa. Markaa anagu waxaanu leenahay Maydka yaan la haysan ee ha la aaso.”
Waxaanu sheegay Suldaan Xuseen Xaaji Cabdi, in ay weli faraha ku hayaan xalintii rabshadaas iyo kala fadhiisinteeda. Guud ahaanbana Salaadiintu waxay ka midaysnaayeen in arrintani ahayd dhacdo fool xun, oo cid dano gaar ah lihi ka dambaysay, lana doonayay in dadka shicibka ah ee Caasimada Hargeysa ku nool nabad-galyadooda wax lagu yeelo.
« War-Degdega:Rabshad Gacan ka hadal ah ayaa saaka ka bilaabantay Degmadda Axmed Dhagax ee Magaalada Hargaysa. Madaxwayne Rayaale Oo Maalinta Beri Khudbad U Jeedinaya Labada Gole Ee Baarlamaanka Somaliland. »